Porto Rico: miady tanim-panjakana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Aogositra 2009 5:42 GMT
Mponin'i Villas del Sol – saripikan'i José Antonio Rosario nahazoana alalana tamin'ny Prensa Comunitaria.
Vao namoaka didy ny fitondrana Porto Rikana hanaisotra any Villas del Sol fokontany any Toa Baja, fianakaviana miisa 200 lazainy fa mibodo ny tany izay mora tratran'ny tondra-drano. Nandefa gazy mandatsa-dranomaso ny mpitandro ny filaminana ary nanafika ny fokonolona, izay mpifindra monina avy any amin'ny Repoblika Dominikana ny ankamaroany.
Polisy teo am-pidirana ny fokontany – saripikan'i José Antonio Rosario nahazoana alalana hivoaka eto tamin'ny Prensa Comunitaria.
Nampamaivay adihevitra teo amin'ny tontolom-bolongana Porto Rikana ity fifanoheran-kevitra ity. Ao amin'ny bolongany Poder, Espacio y Ambiente (ES), ny mpampiana-dalàna sy manampahaizana momba ny tontolo iainana, Erika Fontánez, no manameloka ny herisetran'ny Polisy (ES):
“Pistola” – saripikan'i José Antonio Rosario nahazoana alalana tamin'ny Prensa Comunitaria.
Manontany ihany koa i Fontánez hoe fa nahoana moa ny governemanta no mametraka fenitra samihafa amin'ny mpanorin-trano amin'ny toerana iray mampidi-doza na amin'ny tany tsy ara-dalàna:
Michael Castro, mpanoratra ao amin'ny bolongana Poder 5 (ES), no niteny hoe:
Ny mponina sy ny polisy – saripikan'i José Antonio Rosario nahazoana alalana hivoaka eto avy tamin'ny Prensa Comunitaria.
Nanipika ny mpanoratra ao amin'nyEl blog de Sheila Vélez (ES), izay mpahay lalàna fa:
Villas del Sol no fokontany faharoa nanintona ny tontolom-bolongana tamin'ity fahavaratra ity. Nanasonia ny fandravana ny tetikasa vaovaon'ny fokonolona hananganana fananan-tany iombonana antsoia hoe Fideicomiso de Tierras del Caño Martín Peña ny governoran'i Porto Rico, Luis Fortuño, tamin'ny volana jona. Manazava ao amin'ny bolongany Trans(actions): Trans(acciones) (ES), ny mpianatra haka ny mari-pahaizana dokotorà momba ny fandaminana rafitr'asa sy fampivelarana, Deepak Lamba-Nieves, izay nandray anjara ihany koa tamin'ny fananganana ny tetikasa:
The Caño Martín Peña Land Trust nokarakarain'ny Proyecto Enlace sy ireo fokontany 8 manamorona ny rano dia nalaina tahaka tamin'nytarazo, tsy an'i Hugo Chavez amin'ny misiones na ny Reforma Urbana any Kiobà, fa mifanahatahaka amin'i Etazonia izay afaka nanome trano fonenana takatry ny mahantra sy ny kely fidirambola ny vidiny.